YEYINTNGE(CANADA): အင်ဒို လွှတ်တော်မှ ရိုဟင်ဂျာအရေး လေ့လာရေးအဖွဲ့ စေလွှတ်ရန်စီစဉ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/07/2012
OIC ကိုတခုလောက်မေးချင်တယ်။ ဒို့နိုင်ငံမှာလာပြီးကျီးလိုအာနေကြတယ်။မင်းတို့မူဆလင်နိုင်ငံတွေမှာကော အခြားဘာသာဝင်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်ခွင့်ရကြရဲ့လား? ကိုယ်ချင်းစာကြရင်ကောင်းမယ်။ ဒို့ပြည်ထဲမှာမင်းတို့ဗလီတွေမှိုလိုပေါက်နေတာ တွေ့လား? မင်းတို့နိုင်ငံတွေမှာကော ဒို့ဘာသာရေးအဆောက်ဦးတွေအဲဒီလိုဆောက်လို့ရရဲ့လား? ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဟင်ဒူဘုရားကျောင်းတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောက်ခွင့်ရကြသလား? ဆီးရီးယားမှာ မင်းတို့မူဆလင်အချင်းချင်းထောင်သောင်းချီပြီးသတ်နေတာတောင် မင်းတို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ဖြေစမ်းပါ။ အလကား မယောင်ရာဆီလူးတဲ့ အတ္တသမားစောက်ရူးတွေ။ မင်းတို့မူဆလင်အစွန်းရောက်တွေဖျက်ဆီးလို့ဒို့နိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်လုပ်လိုက်စမ်းပါ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ ဒီမှာဒါလောက်ပဲပြောရလို့တော်သေးပြီ။